Muuqaal Ka Danbaysa Muuqaallada La Yaabka Leh ee IMEX America waara
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Muuqaal Ka Danbaysa Muuqaallada La Yaabka Leh ee IMEX America waara
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Safarka MGM Resorts Mega Solar Array.
Tani waxay u qaadaa "daawashada gadaasheeda" heerar cusub! Goobaha loo dalxiis tago ee MGM waxa ay marti galiyeen dalxiis ka soo qayb galayaasha IMEX America si ay ugu eegaan goobtooda gaarka ah ee Mega Solar Array.
Safarkan waxa uu ka dhacay saxaraha dhul 640-acre ah oo ku yaala Nevada waxana uu ahaa qayb ka mid ah isniinta Smart ee IMEX America.
Halkaa, ka qaybgalayaashu waxay fursad u heleen inay arkaan sida loo dhaliyo koronta cadceedda iyadoo la adeegsanayo 300,000+ baalal qoraxda.
Tani waxay ahayd hal safar oo qaar badan oo ay soo saartay IMEX taas oo qayb ka ah horumarinta xirfadeeda iyo barnaamijkeeda dhacdooyinka bulshada.
Safarka goobta 640-acre ee saxaraha ayaa qayb ka ahaa Smart Isniin, waxaa ku shaqeeya MPI.
Kooxda ka qaybgalayaasha 25 ayaa booqday goobta dabiiciga ah ee cajiibka ah si ay u ogaadaan sida korontadu ay u soo saarto 300,000+ panels, sida loogu qaybiyo shabkada guryaha MGM, iyo sida ay uga caawiso yaraynta qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo oo awood u siinaya dhacdooyin badan oo cimilada saaxiibtinimo leh.
IMEX Ameerika hadda waxay ka dhacaysaa MGM hantida, Mandalay Bay, laga bilaabo Noofambar 9 - 11.
Socdaalku wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa badan oo ay soo saartay IMEX iyo la-hawlgalayaasheeda kala duwan taas oo qayb ka ah horumarinta xirfadeeda iyo barnaamijka dhacdooyinka bulshada ee calaamadeynaya daabacaadda 10-aad ee bandhigga ganacsiga ee hogaaminaya adduunka ee warshadaha dhacdooyinka ganacsiga caalamiga ah.